Wiktionary:Famoronana ny anaran-tsehatra Rakibolana - Wikibolana, raki-bolana malalaka
Wiktionary:Famoronana ny anaran-tsehatra Rakibolana
(tonga teto avy amin'ny Wiktionary:Anaran-tsehatra vaovao)
Mitombo, mitombo ary mitombo hatrany ny vohikala malagasin'i Wikibolana, ankehitriny ny isan'ny teny iditra ato dia mihoatra ny valo hetsy, koa izaho, Jagwar, dia manan-kevitra ny mamorona anaran-tsehatra iray manokana ho an'ny rakibolana.
Ny antony anokafana anarantsehatra vaovao dia hanolotra tsaratsara kokoa ny teny izay ato amin'ity rakibolana ity, mba hanintona ireo mpitsidika handray anjara eto amin'ity tetikasa ity, amin'ny alalan'ny fanehoana azy ireo ny zavatra efa vita, satria anaty sokajy ihany izao no ahitana ireo voambolana amin'ny fiteny vahiny ary amin'ny fiteny malagasy.
Ny ankamaroan'ireo rakibolana eo amin'ny Tranonkala dia manana fomba manokana anolorana araka ny votoatiny, koa noho isika manangona ny teny amin'ny fiteny rehetra dia tsara amintsika ny manolotra ireo teny amin'ny fiteny vahiny amin'ny alalan'ny famoronana rakibolana amin'ireo fiteny ireo, mba hanehoana ny harena ara-boambolan'ity Wikibolana ity. Araka izany dia hanolotra ireo rakibolana ireo ny fampiasana ny pejy fandraisana.
Azo atao ihany koa ny mamorona rakibolana manokana izay manolotra ny voambolan'ny taranja iray : ohatra, ny rakibolana malagasy ny informatika, ny elektrônika, ary ny biôlôjia. Rehefa misy ireo rakibolana manokana ireo dia hanolorana ireo rakibolana ireo ny ho tanjon'ny renipejin'ny (rakibolana) fiteny iray.
1 Ny anarana voasosokevitra ?
3 Amin'ny lafiny ara-teknika
Ny anarana voasosokevitra ?[Ovay]
Mazava ho azy, ny sosokevitro mikasika ny anaran'ilay anaran-tsehatra dia "Rakibolana", tsy misy fitsipi-panohizana, mba tsy hampahasasotra ny fanoratana azy eo amin'ny klavie.
Ny tanjona namoronana ilay anaran-tsehatra dia manolotra - amin'ny teny malagasy mazava ho azy - ny tenin'ny fiteny izay misy ao amin'i Wikibolana ; ohatra : frantsay, anglisy, latina, espaniola, ary mazava ho azy : malagasy.
Ilay anaran-tsehatra koa dia hahafahana mamorona raki-bolana natokana ho an'ny taranja iray : teknika, siansa, siansan'olombelona, sns. araka izay ilaina.
Amin'ny lafiny ara-teknika[Ovay]
Tsy anjarantsika mpikambana eto amin'i Wikibolana amin'ny teny malagasy ny mamorona anaran-tsehatra vaovao, fa anjaran'ireo olona izay mpanitatra ny fahafahan'ny rindrankajy Mediawiki izay antsoina koa hoe developpeur Mediawiki amin'ny fiteny frantsay. Koa raha tsy misy ny tsy manaiky ity fikasana ity dia ho tanteraka izany alohan'ny faran'ny taona.
23 Jan. : Voaforona ilay anaran-tsehatra vaovao
30 Okt. : Fanokafana ilay fikasana.
15 Des. : Efa nalefa tany amin'i Bugzilla ilay sosokevitra noho tsifisian'ireo olona namaly : jereo eto
Hita tao amin'ny "https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=Wiktionary:Famoronana_ny_anaran-tsehatra_Rakibolana&oldid=6309731"
Voaova farany tamin'ny 25 Janoary 2012 amin'ny 18:32 ity pejy ity.